Abụ nke 57—Anyị Na-ezi Ụdị Mmadụ Niile Ozi Ọma | Abụ Ndị Kraịst
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cibemba Cinyanja Croatian Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik English Ewe Fijian Finnish Fon French Ga German Gokana Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Italian Kachin Karen (S'gaw) Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Luvale Macedonian Macua Macushi Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Myanmar Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Romanian Russian Samoan Saramaccan Sena Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Shuar Silozi Sinhala Somali Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Wayuunaiki Welsh Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
ABỤ NKE 57
Anyị Na-ezi Ụdị Mmadụ Niile Ozi Ọma
1. Anyị chọr’ịn’eṅomi Chineke.
Anyịa-gagh’ele ’madụa-nya n’ihu.
Ọ chọrọ k’a zọpụta ’madụ dum.
Ọ n’anabat’ụdị ’madụ niile.
Eb’ọ bụla ’madụ si,
Ihe kam-kpa bụo-bi ya.
Anyị n’ezi ’madụ niil’oziọ-ma,
N’ezi ya n’ebe niile.
Anyị hụrụ ha n’anya.
Ha niile g’abụlie-nyi Jehova.
2. Ebe ’madụ nọe-nwegh’ih’o mere.
Ọdịdị y’enweghịkw’ih’o mere.
Ihe kam-kpa bụo-tú obi ya dị.
Ọ bụkwa ya ka Jehova n’ele.
3. Jehova n’anabatan-dị niile
Hapụr’ụwa n’omume ya niile.
Ọ bụ ya bụ ozia-nyị n’ezi ha.
Anyị n’ezi y’ụdị ’madụ niile.
(Gụọkwa Jọn 12:32; Ọrụ 10:34; 1 Tim. 4:10; Taị. 2:11.)
Anyị Na-ezi Ụdị Mmadụ Niile Ozi Ọma (Abụ nke 57)